सदस्य, स्वतन्त्र राजनीतिक समूह
० तपाईंहरूले राजपा छोड्नुभएको हो ?
— हो । हामीले राजपा परित्याग गरेका हौं । नेकपा एमालेसँग सहकार्य गरेर चुनावमा सहभागिता जनाउने हामीबीच सहमति भएको छ । तर, हामीले नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेको होइन ।
० नेकपा एमाले नै रोजाइमा किन परेको होला ?
— नेपाली कांग्रेस र माओवादीसँग हामीले विगतदेखि नै सहकार्य गर्दै आएका थियौं । तर, नेपाली कांग्रेस र माओवादीले मधेशका समस्या समाधान चिन्तित बनेनन् । मधेशको सवालमा सकारात्मक परिणाम आउने देखिएन । संविधान संशोधनसमेत फेल भएको अवस्था छ । नेकपा एमालेसमेतको सहभागिताबिना संविधान संशोधन विधेयक पास हुन सक्ने अवस्था छैन । अर्को निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले कोरेको रेखाप्रति हाम्रो असन्तुष्टि छ । हाम्रै समर्थनको सरकारले बनाएको आयोगले निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँडमा न्याय गरेको देखिएन । मधेशवादी दलको उपस्थिति नै नहुने गरी पाँच नम्बर प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । पाँच नम्बर प्रदेशमा हाम्रो क्लस्टर नै सुरक्षित छैन । अर्को, राजनीतिक अवस्था पनि अर्को मोड लिएको देखियो । त्यसकारणले हामीले नेकपा एमालेसँगको पटक पटकको छलफलपछि सम्झौता गरेका हौं । निषेधको राजनीतिले मात्रै हुँदैन । सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्छ । त्यसकारण हामी एमालेसँग सहकार्य गरी अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं ।
० तपाईंहरूले विगतमा धेरै विरोध गर्दै आउनुभएको पार्टीसँग सहकार्य गर्न पुग्नुले सबैलाई आश्चर्यमा पारेको छ । एमाले कसरी अचानक प्यारो हुन गयो ?
— हेनुस् । निषेधको राजनीतिले केही हुँदैन । अहिले राजनीतिक वातावरण फेरिएको छ । नेकपा एमाले एक नम्बर पार्टी बन्ने लाइनमा छ । एमाले पनि अरू दलसँग सहकार्य गर्न खोजिरहेको छ । राजनीतिक शक्तिहरू अलगथलग भएर देशको समस्या समाधान हुँदैन । यस्तो परिस्थितिमा सबै मिलेर अघि बढ्नु राम्रो हो । फेरि हामीले आफ्ना मुद्दा र एजेण्डालाई छाडेको छैन नि । यो कुरा हामीले गरेको सम्झौतापत्र प्रष्टसँग लेखिएको छ । तराई मधेशसहितका उत्पीडित जनतालाई समानताका अधिकार प्राप्तिमा अगाडि बढ्ने साझा दायित्व हुने कुरा लेखिएको छ । मधेशका समस्या समाधानमा एमाले सकारात्मक भएपछि उसँग सहकार्य गर्न कुनै समस्या छैन नि ।
० त्यसो भए मधेशीको अधिकार प्राप्तिको लडाईंमा राजपा नै बाधक बनेको तपाईंहरूको आरोप छ ?
— राजपा बाधक बनेको होइन । तर, राजपाले दुई नम्बर प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशको ख्याल गरेन । पाँच नम्बर प्रदेशलाई बेवास्ता ग¥यो । अर्को, राजपाको समर्थनमा रहेको सरकारबाट गठित क्षेत्र निर्धारण आयोगको कामप्रति कुनै आपत्ति जनाएन । पाँच नम्बर प्रदेशको क्षेत्र निर्धारण गर्दा उत्तर दक्षिण बाडिएको छ । कांग्रेसको हिसाबले मात्र क्षेत्र निर्धारण भएको देखियो । भनेपछि राजपा किन केही बोलेन ? क्षेत्र निर्धारणमा पाँच नम्बर प्रदेशका मधेशीसँग अन्याय हुँदासमेत राजपा केही बोलेन । यी सबै कारणले हाम्रो राजनीतिक अस्तित्व नै संकट परेको छ । त्यसका लागि पनि एमालेसँग हामीले सहकार्य गरेका हौं । अरू पार्टीले त पार्टी प्रवेश गर्न भनेका थिए । तर, एमाले सहकार्य गर्न तयार भयो । हामी एमालेमा प्रवेश नगर्ने, मात्र सहकार्य गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको हो ।
० मुख्य असन्तुष्टि क्षेत्र निर्धारण हो ?
— थुप्रै असन्तुष्टिमध्ये यो पनि एउटा असन्तुष्टि हो । राजपाले कांग्रेससँग सहकार्य गरेको थियो । त्यसैले पाँच नम्बर प्रदेशमा मधेशी बाहुल्य क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने सवालमा राजपा बोल्नुपर्दथ्यो । तर, बोलेन ।
० यसका लागि पार्टीभित्र दबाब दिन सक्नुहुन्थ्यो । किन दबाब दिनु भएन ?
— पार्टीका शीर्ष नेताहरूले ध्यान दिनुपर्ने थियो । प्रदेश नम्बर २ का ख्याल गर्ने तर, पाँच नम्बर प्रदेशको बेवास् ागर्ने काम गरियो । अर्को पाँच नम्बर प्रदेशमा चुनावका बेला बहिष्कारको नीति लिइएको थियो । जसले गर्दा हाम्रा मानिस यताउता गए । राजपाले मात्र दुई नम्बर केन्द्रित राजनीति गरेको देखियो ।
० हृदयेश त्रिपाठीजयू पनि त राजपामा अध्यक्षमण्डलका सदस्य हुनुहुन्थयो नि । असन्तुष्टिका विषयमा पार्टीमा बोल्न सक्नुहुन्थयो नि ।
— त्यो त पछिबाट नामका लागि उहाँलाई अध्यक्षमण्डलको सदस्य बनाइएको थियो । राजपाले देखाउनका लागि मात्र त्रिपाठीजीलाई अध्यक्षमण्डलमा ल्याएको थियो ।
० भनेपछि पश्चिमका आफ्ना नेताहरूलाई राजपाले पाखा लगाउने काम गरेको भन्नुहुन्छ ?
— हो । राजपाले हामीहरूलाई उपेक्षित गरेकै हो । यो उपेक्षाविरूद्ध हामीले केन्द्रीय कार्यसमितिमा पनि आवाज उठाएका थियौं । नेतृत्वलाई पनि हामीले सचेत गराएका थियौं । तर, उहाँहरू ध्यान दिनुभएन । पश्चिमको सवालमा नेतृत्वहरू कहिल्यै पनि गम्भीर बनेनन् । त्यसकारण हामीले कुनै न कुनै बाटो लिनै पर्ने थियो ।
० संविधान संशोधन नहुँदै राजपाले स्थानीय चुनावमा सहभागिता जनाएकोप्रति पनि आपत्ति छ ?
— होइन । यसमा हाम्रो आपत्ति छैन । हाम्रो मुख्य सरोकार के हो भने जुन हिसाबले कांग्रेसको सहयात्री राजपा बनेको थियो, त्यो हिसाबले राजपाले केही लिन सकेन । पाँच नम्बर प्रदेशको क्षेत्र निर्धारणमा समेत राजपा केही मतलब राखेको देखिएन । राजपाले कांग्रेसकै हितका लागि मात्र काम गरेको जस्तो देखियो ।
० राजपा कांग्रेसको पिछलग्गु बनेकै हो ?
— हो । राजपाको काम गर्ने शैली त्यस्तै छ । संविधान संशोधन नगराएर चुनाव जाँदा कांग्रेसलाई नै फाइदा भएको छ । पाँच नम्बर प्रदेशमा पनि दक्षिण उत्तर सीमा कोरिएको छ ।
० भनेपछि नेकपा एमालेले तपाईंहरूका माग सम्बोधन गर्छ ?
— गर्छ । पाँच नम्बर प्रदेशका समस्या सम्बोधनमा एमाले सकारात्मक देखिएको छ । हामी निषेधको राजनीति मात्र नगरौं । मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ । हामी स्वतन्त्र रूपमा एमालेसँग सहकार्य गरी चुनाव लड्छौं । मधेशका सवालमा नेकपा एमाले सकारात्मक छ ।
० नेकपा एमाले मधेशमा दुई प्रदेशका लागि तयार हुन्छ ?
— मधेशमा दुई कांग्रेस, माओवादीलगायत कसैले पनि त दिन तयार देखिएको छैन । एमालेले दिन्छ भन्ने कुराको म ग्यारेन्टी त लिन्न नि । सहकार्य गरेर जाने वातावरण बनेको छ ।
० तपाईंहरूले स्वतन्त्र राजनीतिक समूह बनाउनुभएको छ । भनेपछि स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लड्नुपर्नेमा एमालेसँगको सहकार्य किन ?
— सहकार्य आवश्यक छ ।
० होइन, स्वतन्त्रलाई सहकार्य किन आवश्यकता प¥यो ?
— हामी चुनाव लड्दा स्वतन्त्र रूपमा नै लड्छौं ।
० अनि सूर्य चिह्न लिएर लड्ने भन्नु भएको छ नि त ?
— हामी तालमेल गरेर सूर्य चिह्न लिएर लड्छौं ।
० स्वतन्त्र पनि भन्नुहुन्छ, पार्टीको चुनाव चिह्न पनि रोज्नुहुन्छ । किन नि ?
— हामीले चुनाव चिह्न रोजेर पार्टीमा प्रवेश गर्ने होइन । यो तालमेल हो ।
० कुनै बेला नयाँ शक्ति फोरम नेपालको चुनाव चिह्न लिएजस्तै एमालेको चुनाव चिह्न लिएर लड्नुहुन्छ ?
— हो । त्यस्तै हो, त्यस्तै ।
० एमालेमा प्रवेश गर्नुहुन्न् ?
— होइन । हामी एमालेमा जाँदैनौं । सहकार्य मात्र हो ।
प्रकाशित मिति : २०७४ साल असोज २० गते शुक्रबार ।